Ogaden News Agency (ONA) – Faallo: Maxaa Laga Fahmi Karaa Baaqa Madaxda Ururwaynaha ONLF ee Halkudhigiisu Yahay Midnimo? By- Xaaji M/rashiid.
Faallo: Maxaa Laga Fahmi Karaa Baaqa Madaxda Ururwaynaha ONLF ee Halkudhigiisu Yahay Midnimo? By- Xaaji M/rashiid.
Posted by ONA Admin	/ February 27, 2018
BISMILLAAH- halgamayaal marka 1aad waxaan mahadinayaa Rabigii halganka xaqa ah ee Ogadenya kasocda soo gaadhsiiyay meeshan uu maanta marayo, marka 2aad waxaan bogaadinayaa Ciidanka Wadaniga Xoreynta Ogadenya (CWXO) iyo madaxdooda inay u dhabar adeygeen darteed dagaalkii dheeraa ee ay lagaleen Gumaysta Itoobiya iyo canaasiirtooda. Intaa kadib waxaan doonayaa inaan qormadan ku eego mawduuc muhiim ah oo baryahan Media si baaxad leh uga dhexmuuqday .
Sida la ogyahay waxaa meel gabagabo ah maraya jirintaankii taliska Wayaanaha oo in kabadan 25 sano ku tumanayay shucuubta kala duwan ee kuhoos dulmanaa. Waxaa meel walba kasocda abaabul waji cusub galay oo ah inay qowmiyad waliba kor iyo hoosba isugu baaqday iyadoo kuwada hadlaysa luuqadeedii gaarka u ahayd. Maadaama oy qowmiyad waliba aaminsantahay in muddo dheer lasoo bahdilayay, waxay maanta rabtaa inay aayaheeda gacanta kudhigto.
Sidaad lasocotaan umadda Soomaalida Ogadenya waxaa indho u ah Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (ONLF/JWXO) oo kolba la wadaagta bulshadeeda wixii saaxada halganka ku cusub. Jabhaddu waxay asbuucyadan baahinaysay baaq ay udireyso umadda Soomaalida Ogadenya, baaqaas oo xambaarsan halkudhiga ah (Midnimo ). Weedhaas oo iska cad ayay hadana dadku aragtiyo kala duwan ka qaateen. Waxaan insha allaah isku dayi doonaa inaan faallo waafi ah kabixiyo eraygaas.
Madaxda jabhada ONLF ayaa dareensan in mudadii ay halganka kusii jeedeen la biliiliqeystay qaar badan oo kamid ah bulshadoodii. Qaar waxaa laga qabsaday maskaxda iyadoo loo marayo dhanka waxbarashada. Qaar ciidan baa laga dhigtay iyadoo loo marayo difaaca dalka. Qaar soo dhawayn iyo xaflado loo sameeyay ayaa lagu qabsday sida qurbajoogta oo kale.
Markay madaxda jabhaddu qiimaysay xaaladda waqtigan waxay ogaatay in dad badani saaxada halganka kamaqanyihiin. waxaa kale oo intaa dheeraa in bulshadii colaad lakala dhex dhigay oo madaxa la isu galiyay. Bal kawaran xoolahaaga bahal galo waqti habeen ah waxaa dhacda in qaarba meel ufirxado kadibna masuulkii lahaa uu baadi goob ugalo siduu isugu keeni lahaa wixii kabadbaaday. Sidaas oo kale ayay jabbadu maanta doonaysaa inay dadkeedii kala firaxaday wixii kahadhay isu soo uruuriso.
Dadwayne farabadan ayuu guumaystuhu kasbaday sidaan soo sheegay kuwo kalana dhexdooda ayuu isku diray isagoo ka faa’iideystay duruufihii adkaa ee bulashada lasoo darsay, balse maanta oon maamulkii macangaga ahaa uuna waxwayne gacanta ugu jirin waxaan isleeyahay waa fursad dahabi ah oo ay jabhaddu haysato. Bulshada Soomaalida Ogadenya oo maanta israacda waxay soo dadajin kartaa in gacanta lagu dhigo dalka lana gaadho sharaf iyo karaamo.
Hagamayaal iyo Mahalgamayaal midnimadu waa shay qaali ah oo diinta islaamku si adag uga hadashay maadaama haybadda umadi leedahay ay ku xidhantahay iskaashigeeda. Dadka muslimka ah waxaa la amray inay wadajir salaadda kugutaan, Xajkana wadajir ku gutaan, Ramadaankana wadajir usoomaan iyo sidoo kale inay wadajir ku halgamaan, dulmigana iska dulqaadaan. Dawladda aad maqasheen ee lawada jecelyahay waxay ka koobantahay Qoysas la isku daray, Xaafado la isku daray, iyo Tuulayaal la isku daray oo samaystay goobo cayiman oo laga maamulo.
Tusaale- Xoolaha intaan ka aqaano waxaa la sheegi jiray inuu kujiro Neef baaldaaq ah. Waa Neefka jecel inuuna xoolaha kale ee walaalihii ah soo dhex galin, waxaana dabeecad u ah inuu baasha ka bidhaan dhawrto, balse waa neef marwalba halis kujira oo inuu waraabuhu cuno ayuu fursad usiinayaa, Hadaba Ruuxii yidhaaha kaligay ayaa halgamaya muddo intee dhan ayuu halgankiisa wadi karaa, waxaaba kufilan isagoo xanuunsada ama iska yara caajisa. Halganka JWXO hogaaminayo wuxuu leeyahay dhabar uu ku qaado malaayiin dad ah, shaqsi walibana wuxuu helidoonaa shaqada uu ku haboonyahay markii dalka la hanto insha Allaah.
Madaxa JWXO marna mayna ku dhawaaqin inay cafiyeen dad dambiilayaal ah. Taa badalkeeda waxaa wax cafiyi kara oo kaliya dadkii dambiyada laga galay haday doonaana cafin maayaan. Baaqa minimadu ma’aha markii ugu horreysay ee jabhaddu ku dhawaaqdo ee horayba way jirtay inay bulshada cadowgu qalday ugudbiyaan inay kusoo biiraan safka halganka, kana soo baxaan safka guumaystaha.
By- Xaaji M/rashiid.